China 3.5 intshi 320X240 300nits TN, ngaphandle TP, RTPCTP ozikhethelayo, 54pins CPURGBSPI NV3035C mveliso kunye nabenzi | Hengtai
Ubukhulu: 3.5 intshi
Isigqibo: 320 * 240
I-AA: 70.08 * 52.56 (mm)
Ulwandlalo: 76.9 * 63.9 (mm)
Ukuqaqamba: 300cd / m2 (Uhlobo)
Iqondo lobushushu lokusebenza: -20-70 ° C
Ubushushu bokugcina: -30-80 ° C
Isixhobo: RGB / CCIR601 / CCIR656
Uhlobo lokubonisa: TFT / Transmissive
Ukujonga ikona: ngentsimbi ye-12
Umqhubi IC: NV3035C
Iphaneli yokuchukumisa: I-RTP ngaphandle kwe-RTP okanye i-CTP inokwenziwa ngokwezifiso ngokufanelekileyo.
Egqithileyo I-3.5 intshi 320X240 240nits, kubandakanya i-RTP, TN, i-54pins CPURGBSPI NV3035C
Okulandelayo: I-3.5 intshi 320X240 350nits CPURGBSPI ujongano SSD2119 50pins wiht RTP
Uluhlu olubanzi lomboniso: kubandakanya i-monochrome LCD, i-CSTN, i-TFT, i-RTP / i-CTP kunye ne-OLED;
Gqibezela izisombululo zepaneli: kubandakanya umboniso, ikhibhodi, izindlu kunye nokudibana;
Inkxaso yobugcisa kunye noyilo ngaphakathi.
Umbono kunye nezibonelelo zethu:
Ukuqonda okunzulu nokubanzi kwezicelo zokugqibela;
Iindleko kunye nokusebenza kohlalutyo lweentlobo ezahlukeneyo zokubonisa;
Ingcaciso kunye nentsebenziswano kunye nabathengi ukugqiba eyona teknoloji yokubonisa ifanelekileyo;
Ukusebenza kuphuculo oluqhubekekayo kwitekhnoloji yenkqubo, umgangatho wemveliso, ukonga iindleko, ishedyuli yokuhanjiswa, njalo njalo.
Umbono wethu: Ukubhiyozela IMPUMELELO kunye nabathengi kunye nababoneleli!
HengTai (HK) CO., Umda. yinkampani esekwe eHong Kong, eyenye yeenkampani ezinomdla kubuchwephesha beLCD, iimveliso zemodyuli yeLCD, iOLED kunye nezisombululo ezipheleleyo zepaneli. Ukusukela oko yasekwa, i-HengTai-TG iphuhlise imveliso kunye nolwazi lobuchwephesha oludityaniswe nenethiwekhi yethu ebanzi yomthengisi. Sikwazile ukubonelela ngeenkonzo ezongezwe ngexabiso kubo bonke abathengi bethu abakhoyo nabakhoyo. kunye nobunzulu bethu kulwazi lwemveliso kunye nenethiwekhi yethu ebanzi yeshishini, imisebenzi yeHengTai-TG njengebhulorho esebenzayo ngokunika ukuthelekiswa okukhawulezileyo kweemfuno ezinokubakho kunye ezizodwa zabasebenzisi bokugqibela kwihlabathi liphela.
Umbuzo: 1. Ndingayifumana iodolo yesampulu?
A: Ewe, samkela isampulu yoku-odola ukuvavanya kunye nokujonga umgangatho.
Q: 2. Liliphi ixesha elikhokelayo lesampulu?
A: Iimfuno zesampulu yangoku ziintsuku eziyi-1-3, iisampulu ezenziwe ngokwezifiso zifuna iintsuku ezili-15 ukuya kwezi-20.
Q: 3. Ngaba unayo nawuphi na umda we-MOQ?
A: MOQ yethu 1PCS.
Q: 4.Ide kangakanani iwaranti?
A: Iinyanga ezingama-24.
Q: 5. yeyiphi inkcazo oqhele ukuyisebenzisa ukuthumela iisampulu?
A: Sihlala sithumela iisampulu nge-DHL, i-UPS, i-FedEx okanye i-SF. Ihlala ithatha iintsuku ezingama-3-5 ukufika.
Q: 6. Liliphi ixesha lakho lokuhlawula elamkelekileyo?
A: Ixesha lethu lokuhlawula li-T / T. Abanye banokuxoxisana.
Q: 7. Uqhubeka njani nomyalelo ukuba ndinophawu lokuprinta?
A: Okokuqala, siya kulungisa umsebenzi wobugcisa wokuqinisekisa, kwaye ngokulandelayo siza kuvelisa isampulu yokwenyani yesiqinisekiso sakho sesibini. ukuba isampulu ilungile, ekugqibeleni siya kuya kwimveliso yesininzi.
Q: 8. Ngaba imveliso inokwenziwa ngokwezifiso njengoko kufuneka?
A: Ewe, Ezi mveliso zilapha ngasentla ziimveliso zethu ezisemgangathweni kwaye zingenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo malunga neemveliso, nceda unxibelelane nathi ngokukhawuleza. Siza kukusebenzela ngentliziyo iphela, enkosi!
Imodyuli yeTft yokubonisa
Isikrini esibonisa iTft
Tft LCD Bonisa
Tft LCD Bonisa Arduino
Imodyuli yeTft LCD yokubonisa
Umboniso weTft Touch
3.5 intshi 320X240 350nits CPURGBSPI interface SS ...
I-intshi ye-3.5 ene-RTP 320X240 400nits 54pins TTL NV ...
I-3.5inch 240X320 600nits yokuqaqamba okuphezulu ...
3.5, IPS TFT 320480 350nits, iCPURGBSPI Kwi ...
I-3.5 intshi 320X240 240nits, kubandakanya i-RTP, TN, 54 ...
I-3.5, uhlobo oluguqukayo lwelanga elifundekayo TFT ...